မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း အဓိပ္ပါယ်…။ – Pwintsan
Homeဗဟုသုတများမြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း အဓိပ္ပါယ်…။
မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း အဓိပ္ပါယ်…။
၁ ။ျမစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့
၂ ။ သစ္ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့
၃ ။ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကြဲစေနဲ့
ကြားတော့ ကြားဖူး၏ သို့သော် တြင္တြင် က်ယ္က်ယ် သိသူတော့ ရွား၏
ျမစ်ကြီးလည်း မခမ်းပါစေနဲ့ ဆိုတာ ကြည္လင် အေျးမတဲ့ တသြင်သြင္စီဆင်းနေတျဲ့မစ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ … မေတ္တာတရားမ်ား လူသားတြေမွာ မခမ်ျးေခာက္ပါစေနဲ့ .. လို့. ဆိုလျိုခင်ျးဖစ်၏ ၊
လူသား အခ်င်းခ်င်း ဆြေမ်ိုး မိတ်သဂင်္ဟအခ်င်းခ်င်း မေတ္တာထားပြီး နေထိုင်ကြမယ် ..အားလုံးသော သတ္တဝါအနန္တ အေပ်ါမွာလည်း မေတ္တာစမ်းရေမ်ား မခမ်ျးေခာက်အောင် အမြဲပြားမ်ားပြီး နေထိုင်ကြရပါမယ်
ျမစ်အတြင်းမွာ စီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းရေသည် ကြည္လင် အေျးမတဲ့ သေဘာရွိသလို သတ္တဝါ အားလုံးအေပါမွာ ပြားမ်ားနေတဲ့ မေတ္တာ ဆိုတာလည်း ကြည္လင်အေျးမလွ၏ ၊
မေတ္တာ ပြားမ်ားသူရဲ့ သန္တာန္မွာ မေတ္တာဓာတ်တြေ ဝင်ရောက္လာပြီဆိုယင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နွလုံးသားဟာလဲ တျခားအခ်ိန္မျွာဖစ်နေတဲ့ နွလုံးသားနဲ့မတူတော့ဘဲ ကြည္လင္လာ၏ ဘုရားရွင္က … စိတ္တေ ပသေန္န လောဟိတံ ပသီဒတိ .. လို့မိန့်၏
စိတ်ကြည္လင္လာပြီဆိုယင် ရုပ္လဲကြည္လင္လာ၏ … အထူးသျဖင့် မေတ္တာ အမြဲပြားမ်ားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့. မ်တ္နွာဟာ သာမန္ပုဂ္ဂိုလ်တြေနဲ့ မတူတော့ပါဘူး ၊ သတိထားကြည့်ယင် ကျြာခားနေတာ တြေ့ရပါလိမ့္မယ်
ဘာကြောင့္လဲဆိုတော့ မေတ္တာ ဆိုတဲ့ အကြည္ဓာတ္ကေလးက. သူ့သန္တာန္မွာ ကိန်းဝပ်နေလို့ပါဘဲ ။
သစ္ပင်ကြီးဆိုတာ … ဘုရား တရား သံဃာ လို့ခေါ်ဆိုအပ္တဲ့ ရတနာသုံးပါး ကို ဆိုလျိုခင်ျးဖစ်၏ ။
ပကတိ သစ္ပင်ကြီးသည် … အကိုင်းအခတ် ဝေဝစာစာလည်း ရွိတယ် ၊ ပင္စည္ကလျဲပန့္ပြား အရိပ်အာဝါသ လည်း ကောင်းနေမယ္ဆိုယင် …အဲ့ဒီ သစ္ပင်ကြီးရဲ့. အရိပ္မွာ သတ္တဝါ ခိုနားနေနိုင်၏ ၊
ထို သစ္ပင်ရဲ့. အရိပ်အောက် ဝင္လိုက္တာနဲ့တပြိုင္နက္ထဲ.. ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး အေးခ်မ်းမှုကိုခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါး ဆိုတဲ့ အရိပ်ဟာလည်းဝင်ရောက် ခိုနားတဲ့ သတ္တဝါ တိုင်းကို .. ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး အေျးမမှုကို အျပည့်အဝ ပေးနိုင်၏ ။
ဝင်ရောက် ခိုနားတဲ့ သူတိုင်းဟာ ရတနာသုံးပါး ရဲ့အရိပ်ကြောင့် ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး ငြိမ်းခ်မ်းသြားတျာခည်းပါဘဲ ။
ဒါကြောင့် ရွေးလူကြီး သူမမ်ားက … မိမိကို အရိပ်အာဝါသေပးနေတဲ့ သစ္ပင်ကြီးကို ခုတ္လဲ မမိပါစေနဲ့ လိျုေပားဆိုကျြခင်ျးဖစ်၏ ထို့အတူပါဘဲ မိမိတို့ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကြယ်ရျာဖစ္တဲ့ ရတနာသုံးပါး အရိပ္ကိုလဲ မပစ္ပယ်ရဘူး မေမ့ရဘူး
ဘာကြောင့္လဲ ရတနာသုံးပါး ရဲ့. ဂုဏ်ကေ်းဇူးဟာ သိပ်ပြီးတော့ကြီးမားလို့ပါဘဲ …သစ္ပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်ဟာ အေျးမသလိုရတနာသုံးပါး ၏ အရိပ်ဟာလည်း ပစ္စုပ္ပန် ဘဝ သာမက. တမလြန္ဘဝ အတြက္ပါ ငြိမ်းအေးမှုကိုပေး၏
ဒါကြောင့် … ရတနာသုံးပါး လို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ သစ္ပင်ကြီးကို မေမ့ပါနဲ့. အမြဲသတိရပြီး ကိုးကြယ္ဆည်းကပ်ရမည် ဟု ဆိုလို၏ ။
ထုံးအိုးကြီးဆိုတာ …. ရွေးက မိဘ ဘိုးဘြား တြေရဲ့ အစဉ်အလာ လုပ္ထုံး လုပ္နည်းကိုျေပားတာပါဘဲ
မိဘ ဘိုးဘြား တြေရဲ့. ယဉ်ကေ်းမှု အစဉ်အလာ ကောင်းမ်ား ၊ မိဘ ဘိုးဘြား တျြေပုခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး သာသနာရေး အစဉ်အလာကောင်ျးမတ္တဲ့ ထုံးတမ်းစဉ္လာတြေ အဆုံးအမေတြ အက်င့္စာရိတ္တေတြ အားလုံးကို မဖ်တ္စီးရဘူး မေမ့ပေ်ာက်ရဘူး
အစဉ္လာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဆတ္လက်ဆေင်ရက်ြရမယ် …“ ဒါကိုဘဲ ထုံးအိုးကြီး မကြဲစေနဲ့ ´´ ဟျုေပားဆျိုခင်ျးဖစ်၏ ။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတ္စောဉ် ပုဂ္ဂိုလ် မ်ားရွေးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားကြီး ´´ သုံးခြန်း၏အဓိပ္ပါယ် ကို နားလည္နိုင္ပါစေ
နားလည်သည်အားလွေ်္စြာာ က်င့်သုံးနိုင္ပါစေ ….က်င့်သုံးနိုင်သည်အေလွ်ာက် ဘာသာ သာသနာကို ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရွောက် နိုင်ကြပါစေ
မိမိကိုယ္ကို ခ်မ်းသာအောင် ဆောင်ရက္နြိုင္ပါစေ..။
ဧရာမ နှာခေါင်းစည်းပုံစံ ဖက်ရှင်လွယ်အိတ်များ အွန်လိုင်းတွင် ရောင်းချလာ
အငယ်ဆုံးလေးတွေဆိုတာ . .အလိုလိုက်ခံရတာထက် အနစ်နာခံရတတ်တာ များပါတယ်